सक्रिय संक्रमित एक महिना यताकै उच्च : RajdhaniDaily.com
HomeBreaking Newsसक्रिय संक्रमित एक महिना यताकै उच्च
हेलचेक्र्याइँका कारण कोरोना संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेको छ । सरकारले जारी गरेको जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कार्यान्वयन हुन नसक्दा जोखिम पुनः बढेको जनस्वास्थ्य विज्ञले बताउँदै आएका छन् । सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन संक्रमणबाट बच्न स्वयं व्यक्ति आत्मानुशासित हुनुपर्ने बताउँछन् । उनी मास्कको समुचित प्रयोग, भौतिक दूरी कायम र व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता आंैल्याउँछन् ।
२४ घण्टामा भएका समाचारहरु पढ्नुहोस पत्रकार यात्रुसहित चारलाई नगद पुरस्कार र सम्मान
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण पौडेलका अनुसार हालसम्म ९७ लाख ८२ हजार ८ सय ५० खोप नेपालले प्राप्त गरेको छ । प्राप्त भएको खोपमध्ये १६ लाख २१ हजार ७ सय ५४ जनाले कोरोनाविरुद्धको पूर्ण खोप र ३७ लाख ७९ हजार ९ सय ३२ जनाले खोपको दोस्रो मात्रा लगाएका छन् । सरकारले आगामी असोजसम्म खोप लगाउन योग्य ३३ प्रतिशत नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने योजना बनाएको जनाइएको छ ।
राजनीति र शिक्षाको नेक्सस कुनै न कुनै रूपमा विश्व जगत्का अरू देशहरूमा पनि हुने गर्छ । किनभने शिक्षासम्बन्धी नीतिनियम निर्माण गर्ने, पाठ्यव्रmम तर्जुमा गर्ने,...
संसदमा सभामुख सापकाेटाकाे सुरक्षामा तीन मर्यादापालक
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले सांसदहरूको नाराबाजी हुन थालेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई तीनजना मर्यादापालकले सुरक्षा दिन थालेका छन् । गत शुक्रबारको बैठकमा सभामुख सापकोटालाई एमाले सांसद...
काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'माथि आक्रोश पोखेका छन् । गृहजिल्ला झापामा जिल्लास्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई मंगलबार सम्बोधन...
भारतमा कोरोनाबाट एकैदिनमा झण्डै २० हजार संक्रमित
नयाँ दिल्ली । भारतमा कोरोनाभाइरसबाट दैनिक सङ्क्रमितहरुको सङ्ख्या प्रतिदिन बृद्धि हुदै गएको छ । विश्वभरी महामारीका रूपमा फैलिएको महामारीबाट भारतमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्ने क्रम जारी...
नेफ्टा अवार्ड रोकियो
काठमाडौं । चैत २२ मा आयोजना हुने भनिएको १०औं नेफ्टा फिल्म अवार्डसँगै अवार्डको मनोनयन स्थगित गरिएको छ । आयोजक नेपाल चलचित्र प्राविधिक संघले शनिबार...
संविधान दिवसको ऐतिहासिकता
नाडाललाई फ्रेन्च ओपन टेनिस उपाधि
अनर्गल कर्म र वाणीका बाछिटा
एजेन्सी - September 10, 2021